जिबनशैलि – Namaste Host
आखिर किन आफूभन्दा बढी उमेरका महिलाप्रति आकर्षित हुन्छन् पुरुष, यस्ता छन् ८ कारण
June 11, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on आखिर किन आफूभन्दा बढी उमेरका महिलाप्रति आकर्षित हुन्छन् पुरुष, यस्ता छन् ८ कारण
एजेन्सी : बलिउडमा प्रियंका चोपडा(Priyanka Chopra)-निक जोनास(Nick Jonas), मलाइका अरोडा(Malaika Arora)-अर्जुन कपूर(Arjun Kapoor), गौहर खान(Gauhar Khan)-जैद दरबार(Zaid Darbar) र अभिषेक बच्चन(Abhishek Bachchan)-ऐश्वर्या राई(Aishwarya Rai) लगायत यस्ता थुप्रै जोडीहरु छन् जहाँ पति भन्दा पत्नी उमेरले जेठी छन्। नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीका चर्चित कलाकार प्रियंका कार्की(Priyanka Karki) र आयुष्मान देशराज जोशी(Ayushman Deshraj Joshi) पनि उमेर अन्तरको कारण खुब […]
काठमाडौँ । मुम्बईको अपोलो एन्ड फोर्टिस हस्पिटलकी इण्डोक्राइनोलोजिष्ट डा. तेजर लाथिया कसरी टाइप-२ मधुमेहका बिरामीमा भिटामिन डीको विषाक्तता (टक्सिसिटी) भइरहेको छ भन्ने विषयमा पछिल्ला केही दिनयता अचम्ममा परेकी छन्। पछिल्ला केही महिनामा किन यति धेरै यस्ता साइड इफेक्ट भएका बिरामी आइरहेका छन् भनेर गरिएको सर्वेक्षणमा कोभिड-१९ लाग्ने डरले मानिसहरूले सामाजिक सञ्जालमा आएका विभिन्न अफवाहको विश्वास […]
June 10, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on १ सय ४८ वर्षपछि भोलि जुर्ने भयो दुर्लभ संयोग, ४ राशिलाई लाभै-लाभ !
एजेन्सी – बिहिबार ज्येष्ठ कृष्णपक्ष औंसीमा दुर्लभ संयोग जुर्ने भएको छ। शनि जयन्ति समेत रहेको बिहिबारको दिन सूर्य ग्रहण पनि लाग्ने भएकाकारण दुर्लभ संयोग जुर्ने भएको हो। नेपाली समय अनुसार सूर्य ग्रहण बिहिबार दिउँसो १ बजेर ५७ मिनेटमा शुरु भएर ६ बजेर ५६ मिनेट सम्म लाग्दैछ। यसरी शनि जयन्तिका दिन सूर्य ग्रहण लागेको कयौं वर्ष […]
माया गर्ने मान्छे संग टाढा हुँदा कसरि प्रेमलाई जोगाइ रा,ख्ने ? (भिडियो सहित्)
June 10, 2021 June 10, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on माया गर्ने मान्छे संग टाढा हुँदा कसरि प्रेमलाई जोगाइ रा,ख्ने ? (भिडियो सहित्)
मोरङ – आंफुले माया गरेको मान्छे बाट टा,ढा हुनुहुन्छ? तपाईं धेरै टा,ढा,बाट पनि रो,मा,न्टि,क हुन सक्नुहुनेछ । माया गर्ने मान्छे संग भौतिक दुरीले टा,ढा हुँदा पनि कसरि फोनको माध्यमबट प्रेमलाई जो,गा,इ राख्ने अनि रो,मान्चक बनाइ राख्ने भनेर सिक्न सक्नु हुनेछ । रो,मा,न्टि,क कुराहरु गर्नुहोस् ः यदि तपाईं आफ्नो प्रिय मान्छे संग रो,मा,न्टि,क कुरा गर्न चाहानुहुन्छ […]
June 10, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on जस्तोसुकै कालो खुट्टालाई पनि यसरी बनाउनुहोस् केही मिनेटमै गोरो र चमकदार
काठमाडौँ । मौसम परिवर्तनपछि सबैभन्दा धेरै असर छालामा पर्ने गर्दछ। आज हामी तपाईलाई खुट्टालाई गोरो र चम्किलो बनाउने केही उपायका बारेमा जानकारी दिदैछौँ । तपाईले आफ्नो खुट्टालाई आफ्नो घरमै सुन्दर र आकर्षक बनाउन सक्नुहुनेछ। तपाईले कागतीको रसलाई मनतातो पानीमा राखेर त्यसलाई ठूलो भाँडोमा खनाउनुहोस्। त्यसपछि उक्त पानीमा तपाईले आफ्नो खुट्टालाई केही बेर आराम बस्नुहोस्। केही […]
June 10, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on इतिहासकै दुर्लभ क्षण खण्डग्रास सूर्यग्रहण, आज १२ बजेपछि फेरिदैछ यी ४ राशिको भाग्य
June 9, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on आज धनको वर्षा हुने यी ५ राशिको भाग्य हेर्नुहोस्